SAMOTALIS: TALOOYINKA AXMED CAWRO EE KULMIYE
TALOOYINKA AXMED CAWRO EE KULMIYE
Waxaan jecleystay inaan dib u eego taloyiin aan u gudbiyey Shirweyni Kulmiye ee 2007. waa xusuus mudnaanteeda leh, iyadoo aynu ku jirno dhammaadkii muddadii talada dalka leynoo doortay oo dhowaan la geli doono abaabul doorasho . Waxaan dib u eegey qodobadii aan soo jeediyey xiligaas oo Kulmiye isu ababulaayey Shirweyne. In badan oo muhiim ah ayey Alle mahadi ha ka gaadee laga qabtay, waxna wey dhiman yihiin waana sunaha nolosha oo cidina ma fuliso qorshaheeda boqolkiiba boqol, waa se inaynu isku deynaa. Waa dardaaran iyo talooyin dhammeys ah una baahan is xusuusin walow badiba la taabogaliyey, oo aniga ii ah guul gaar ah. Waxaan isku dayi doonaa inaan is dul taago talooyin hore leh iyo xiligeeda.
Waxa baahi weyn loo qabaa waa dardar gelinta xubnaha xisbiga iyo qiimeynta inta xisbinimadu ka dhab tahay.
Dhismaha Golaha Dhexe waa in lagu saleeya waxqabad, karti, daacadnimo, iyadoo la eegaayo in dhammaan gobalada dalku ka muuqdaan si mudakar ah. Qiimeynta qofka ayaa ah tan salka u aha guusha xisbiga. Dadku waxay ka arkayaan xisbiga inta hawsha uloo igmaday ooy kow ka tahay Golaha Dhexe. Waxa xisbi waliba leeyahay kooxo amba garabo is bahaysta, waa sunaha dimuquraadiyadda ee ma aha mid xisbiga wax yeelaysa, haddii koox kastaa ay ixtiraameyso distoorka, iyo nidaamka aqlabiyadda ( Majority rule). Go'aanka ka soo baxa shirwedynahu waa inuu noqda mid dhammaan reer Kulmiye qaataan, mid wax diidan iyo mid dhammaantiiba ku qanacsan, kol haddii inta badani qaadatay. Go'aanku waa mid loo midaysan yahay, kii soo jeediyey, iyo kii diidanaaba. Ninba mar ayuu fikirkiisu hanan karaa aqlabiyadda xisbiga.Waxayna
Ha noqon nin gacmahu u laaban yihiin, oo la taagan dhaliil oon. Adigu is weydii waajibkaagii ma ka soo baxday. Intee wax aad qaban lahayd kaa baaqday, yaad canaananaysaa haddaad ahayd Gudiga Fulinta, haddaad ahyd Golaha Dhexe, haddaad ahyd Guddiga Laamaha. Xisbigu ma qofbaa leh, ma shaqaale ayuu leeyahay. Haddaad waajibaadkaaga ka soo baxday ood cid gooni ah u aragto inay hagratay, waa banaantay inaad keento ood ka dodo. Haddii se qof waliba eedda iska riixo, oo aynu la mid noqono sida Wasiirada Riyaale, ee laga sheego dhaliisha oo ay dhammaan ku riixaan dhinaca Madaxtooyada. Taasi waxay keentaa niyad jab iyo cuqdad aan laga doogsan. Waxa loo baahan yahay dhaliil ku dhisan run, ka bilaabanta naftaada, wadata toosin, dulqaadna u leh inay dhegeysato darafka kale.